Wararka – Page 20 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka Dadban oo War ka soo saaray Cabashooyin jira
November 14, 2016	Leave a comment 31 Views
Guddigu wuxuu si aad ah u soo dhaweynayaa boogadinayaana doorashooyinka Baarlamaanka Aqalka Hoose ee JFS ee ka bilowday Dowlad Gobaleedyada dalka taa oo horumar fiican laga gaaray inta badan. sidoo kale waxa uu bogaadinayaa Doorshada Xubnaha Aqalka sare ee Dowlad Gobaleedka HIRSHABEELE. Dhinaca kale GMXKHDD waxuu Dareen ka muujinayaa socodsiinta howlaha doorashooyinka kuraasta qaar oo cabashooyin badan ay ka jiraan. ...
Cadaado oo Maanta markale ay ka dhaceyso Doorashada Aqalka Hoose
November 13, 2016	Leave a comment 44 Views
Magaalada Cadaado oo Xarun KMG u ah Galmudug waxaa maanta markale ka Bilaabaneysa Doorashada Xubnaha Golaha Shacabka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ka soo galaya Galmudug. Doorashada oo Bilaabatay Khamiistii la soo dhaafay ayaa Maanta Waxaa mar kale ay ka dhaceysaa Magaalada Cadaado. Guddiga Doorashada Dadban ee Dowladda Galmudug ayaa Noo Xaqiijiyay in Maanta ay Doorashada Aqalka Hoose ka Bilaaban doonto ...
DEG DEG:-”SAWIRRO” Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo heshiis ku gaaray Gaalkacyo
November 12, 2016	Leave a comment 36 Views
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in goordhaw garoonka Diyaaradaha magaaladaasi ay heshiis ku gaareen Madaxweynayaasha Maamulka Galmudug iyo Puntland Cabdikariin Guuleed iyo Cabdweli Gaas. Kulanka waxaa dhax dhaxaadinayay Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, waxaana labaa dhinac dhax maray kulamo albaabada ay u xirnaayeen oo looga hadlayay dagaalka Gaalkacyo. Warar horu-dhac ...
Siyaasi Caan ah oo Kismaayo loogu dooratay kamid noqoshada Aqalka Hoose
November 12, 2016	Leave a comment 33 Views
Siyaasiga Maxamed Cabdi Gaandi ayaa ku guuleystay saaka doorashada xubnaha aqalka hoose ee maamulka Juballand oo ka socota maalintii afaraad magaalada Kismaayo. Maxamed Cabdi Gaandi ayaa ka guuleystay nin ay isku beel yihiin oo ay ku tartameen doorashada xubnaha aqalka hoose. Gaandi ayaa dhowaan looga guuleystay doorashadii xubnaha aqalka sare ee Juballand oo uu u tartamay, waxayna arintani jebineysaa go’aan ...
Xoghayaha Guud ee QM oo Danjire Yuusuf Garaad waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay
November 12, 2016	Leave a comment 45 Views
Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay, Ban Ki-moon, ayaa ka guddoomay waraaqda aqoonsiga Danjirennimo ee Wakiilnimada Soomaaliya ee Qarammada Midoobay iyo Faracyadeeda Yuusuf Garaad Cumar Axmed. Xoghayaha Guud iyo Safiirka oo kulan ku yeeshay Xaruunta Qaramada Midoobay ee Magaalada New York, ayaa ugu horreyntii uga waramay sida ay Qarammada Midoobay u garab taagan tahay Soomaaliya, laga soo billaabo maamulkii Qarammada Midoobay ...
Ciidamo gadoodsan oo saaka qabsaday xaruntii doorashada xubnaha aqalka hoose ee Kismaayo
November 12, 2016	Leave a comment 67 Views
Ciidamo gadoodsan oo ka tirsan kuwa maamulka Jubballand ayaa saaka muddo kooban qabsaday xaruntii doorashada xubnaha aqalka hoose Jubbaland ee magaalada Kismaayo. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada hubeysan ay isku gedaameen xaruntaas iyagoo is hortaag ku sameeyey ergooyinka dooranaya xubnaha aqalka hoose oo saaka xaruntaas geli lahaa. Ciidamadan ayaa ka cabanaya mushahar la’aan dhowr bilood heysata iyo daryeel xumo, waxayna ...
Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo Xal rasmi ah u raadinaya Colaada Gaalkacyo
November 12, 2016	Leave a comment 29 Views
Wada hadalo u dhaxeeya Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa maanta ka bilaabanaya magaalada Gaalkacyo, kaasoo xal buuxa looga gaarayo colaadii todobaadyadii la soo dhaafay ka jirtay galbeedka magaalada. Labada Madaxweyne oo shalay gaaray Gaalkacyo ayaa xalay ku kala hoyday labada dhinac ee magaalada, waxaana wada hadalada maanta ay yeelanayaan goob joog ka noqonaya Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid iyo Wakiilka Qaramada ...
Madaxweynaha K/Galbeed Shariif Xasan oo lagu eedeeyey inuu Musuq-maasuqey Doorashada Baydhabo
November 12, 2016	Leave a comment 52 Views
Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu eedeeyey in doorashada aqalka hoose ee ka socota Magaalada Baydhabo uu ku sameeyey musuq-maasuq iyo wax isdaba marin. Afhayeenka Golaha Siyaasiyiinta Da’da yar ee Koofurta Soomaliya Maxamed Nuur Cali (Nuuraani) oo Shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in loo diiday inuu u tartamo kursiga ay leedahay Jifadiisa, ...
Guddi Xal u raadinaya Colaada Gaalkacyo oo lasoo dhaweeyey
Guddi dhexdhexaadin ah oo ka socda Golaha Abaanada Soomaaliyeed islamarkaana ku baxay Joojinta Colaadda Gaalkacyo ayaa Maanta gaaray Magaalada Gaalkacyo. Wafdiga ayaa ku hormaray Dhanka Waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland,waxaana halkaas ku soo dhaeeyay Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland iyo qaar ka mid ah Bulshada ku nool Waqooyiga Gaalkacyo. Guddoomiye Kuxigeenka Golaha Abwaanada Soomaaliyeed Abwaan Xirsi dhuux Maxamed Weheliye oo hor kacaya ...
Danjiraha cusub ee Soomaaliya u magacowday Faransiiska oo waraaqihii aqoonsiga laga gudoomay
Madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa waraaqaha aqoonsiga ee safirnimo ka guddoomay safiirka cusub ee Soomaaliya u qaabilsan dalka Faransiiska Danjire Cali Shariif Axmed, kaasoo xaruntiisa noqoneyso magaalada Paris. Munaasabad kooban oo ka dhacday qasriga madaxtooyada Paris ee Élysée Palace ayaa danjire Cali Shariif Axmed waxaa uu Madaxweyne Hollande ugu gudbiyay warqadihiisa aqoonsiga iyo dhambaal uu ka siday madaxweyne Xasan ...